Isifundo sokugcina impazamo xa ufaka i-rom yeFroyo enengcambu kwiHtc Legend | I-Androidsis
iarriorofice | | Ingcambu Android, nokuVavanyelwa, i-ROM, Tutorials, Iinguqulelo ze-Android
Molo kwakhona, kwiintsuku ezimbini ezidlulileyo kunye neLegend yam ibambekile ndizamile ukufaka iFroyo ROM yokuqala kunye neemvume ze-ROOT kwaye yintoni eyothusayo kum xa ndiqonda ukuba andinakuba nampazamo kwicandelo le-boot kwaye ndingakwazi ukufaka ukuqala kweFroyo.
Emva kweentsuku ezimbini ngathi uphambene ukhangela ulwazi kunye nokubonisana ne-gurus yokwenyani kule micimbi ndikwazile ukuyenza isebenze, kwaye ewe ndifuna ukwabelana nani nonke kwaye abo banayo le ngxaki bayisombulule.
Icandelo I: Unroot kunye neBranding
Ukuqala kwisiphelo esisisiseko kunye nayiphi na into efakiweyo.
Inyathelo lokuqala kukuphulukana nengcambu, kuba siyayidinga
Landela esi sikhokelo kwi-unroot http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=822726
Nje ukuba inguqu ngaphandle kwengcambu ifakiwe, siyaqhubeka ukufaka iVodafone rom ethi eSpain yona ivele kwiVodafone evela eUnited Kingdom.
Sehla le fayile
Xa kufakwe ikhadi legolide, ifowuni ivuliwe kwaye i-Htc Sync ivule kwaye iqaphele ifowuni (ndiyenzile Windows 7 X64) sisebenzisa ifayile yangaphambili kwaye silandele onke amanyathelo.
Nje ukuba igqityiwe sele sinalo ilivo lethu ngaphandle kweNgcambu kwaye kufuneka sinxibelelane ne-wifi kuphela kwaye sijonge ukuba ngaba kukho naziphi na iisetingi zokuhlaziya / malunga nefowuni / uhlaziyo lwesoftware
Kuya kuphuma ukuba ukhuphele u-2,05 okanye u-2,06, oku kunjalo, kuya kufuneka ube nenye yezi nguqulelo ukuze ube nakho ukufaka iFroyo.
Nje ukuba senze olu hlaziyo sijonga kwakhona kwaye sinokukhuphela iFroyo, ngenguqulo 3,14
Emva kolu hlaziyo siqala ngenxalenye yesibini
Icandelo II: Ukwehlisa kunye nokuhlaziya ingcambu
Siqala ngohlobo olusemthethweni lweFroyo efakiweyo.
Kuya kufuneka silandele esi sifundo ukuze sikwazi ukwenza ukwehla ukusukela oko bekungekho ngokwaneleyo
Olu qeqesho lubandakanya ukwenza ukwehla kwasekuqaleni nokuba uyasilela ekugqibeleni, kodwa kunyanzelekile. Enkosi kuPaul O´Brian osuka www.modaco.com
Emva kokwenza esi sikhokelo, kubandakanya inyathelo lokufaka inguqulelo 1,23 yeLegend, sehlile le fayile
Ngoku kufuneka senze uqeqesho lweengcambu oluphuhliswe liqela leModaco.com
Nje ukuba sibe ne-rom egxothiweyo, faka kwakhona iFroyo enengcambu kwaye uya kubona ukuba ngoku ayinangxaki njani.
Ukusuka kwinto endikwazileyo ukuyifunda kwi-Android gurus eyinyani, kusenokwenzeka ukuba xa ufaka esemthethweni uyabona ukuba inamacandelo amabi kwaye yenza ubungakanani kwakhona ukuze ifakwe. Yitsho ukuba kuyo yonke inkqubo bendinenguqulo 1,00,0000 ye-HBOOT. Ndifuna ukubulela uBlaY0 osuka kwiXDA noPaul O´Bran osuka www.modaco.com zeziphi iingqondi eziyinyani ze-Android nabo bonke abantu abakwi-XDA abasoloko besinceda.
Ngoku ngesiNgesi seXDA kunye nabantu be-modaco.com.
Ukuqala ngeNqaku kunye neROM enengcambu.
Inyathelo lokuqala kukukhupha ingcambu, kufuneka
Xa sine-rom ngaphandle kwengcambu siyayidinga faka iVodafone enophawu lweROM
Ngekhadi legolide kwifowuni, i-HTC Sync ivuliwe kunye nomxholo ochanekileyo (ndenze inkqubo kwiwindows 7 X64), fakela iVodafone Branded RUU
Xa le nkqubo izakuphela ukuya kuseto / ulwazi lwefowuni / uhlaziyo lwesoftware
Uya kubona ukuba sinokukhuphela kuphela i-2,05 okanye i-2,06 kuphela, konke kulungile, sidinga olu hlaziyo ngaphambi kweFroyo.
Ngenguqulo ye-2,05 okanye ye-2 × 06 efakwe xa kufuneka inkqubo yohlaziyo lwesoftware kwakhona kwaye ngoku sinokukhuphela i-3,14 yeFreeyo.
Apha iphela inxenye yokuqala.
Sineenkwenkwezi ngeFroyo Branding Froyo esemthethweni
Kuya kufuneka silandele esi sifundo ngenxa yokuba ukwehliswa kwasekuqaleni kwi-XDA akucingelwanga
Le tuto kwinyathelo lokuqala kufuneka uzame ukuthotywa kwasekuqaleni, kwaye awusebenzi kodwa kufuneka uyenze. Enkosi kuPaul O´Brian de www.modaco.com undithathele ukwehla.
Kubandakanyiwe ukwehliswa i ukufakwa kwale RUU
Ngohlobo lwe-1,23 efakiweyo sifuna kuphela ukulandela isifundo kwi ww.modaco.com yengcambu.
Whe sineLegend simile kwakhona sifuna ukufaka kwakhona iFroyo ROM Impazamo ebesinayo yecandelo le-HBOOT elibi. Ndicinga ukuba i-OTA yenza ubungakanani kwakhona okanye ihambise isahlulelo se-HBOOT kumacandelo achanekileyo.Yonke inkqubo esine-1,00 yenguqulo ye-BOOT.Ndifuna ukuthi Enkosi kakhulu !!! ukuya kuBlaY0 weXDA noPaul O´Brian we www.modaco.com i-Android Gurus eyinyani, kwaye bonke abantu be-XDA abahlala besinceda.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » nokuVavanyelwa » Isifundo sokugcina impazamo xa ufaka i-rom yeFroyo enengcambu kwiHtc Legend
Enkosi kakhulu, ubusindisile ubomi bam !!
Ithuba, i-Android yakho ikufumanela isaphulelo
Ukulahla okumangalisayo, ukuhambisa iifayile kwi-Android yakho nge-wifi okanye kwi-3G